Nagarik News - खिचडीमा बिग्रिएको बानी
२२ असार, २०७०
पछिल्लो समय चर्चामा आएका 'सुनगाभा' र 'साँघुरो'लाई धेरै दर्शकले डकुमेन्ट्री टाइपको फिल्म भनेर बुझे। यी फिल्ममा अतिनाटकीयता, हिरोहिरोइनको नाचगान, ढिस्युढिस्यु फाइट, दाह्रा किट्ने भिलेन थिएनन्। दुवैमा कलाकारको अभिनय र प्रस्तुति यथार्थपरक थियो। साधारण दर्शकमात्र होइन, नेपालका केही निर्देशकले समेत यस्ता फिल्मलाई डकुमेन्ट्रीको संज्ञा दिँदै आएका छन्।
फिल्मको नाममा वर्षौंदेखि बलिउडका खुराकमात्र सेवन गरेर हुर्किएका धेरैजसोको बुझाइ यस्तै छ। फिक्सनलाई पनि ननफिक्सन देख्ने मनोविज्ञान बलिउडकै सूत्रवद्ध फिल्मले निर्माण गरिदिएको हो। बलिउड फिल्ममा अहिले पनि मेलोड्रामा र सस्तो टि्रटमेन्टकै हालिमुहाली छ। नाच्नगाउन जान्ने हिरोहिरोइन, डरलाग्दा भिलेन, पाँच गीत, पाँच फाइट यथावतै छन्।
यस्तो फिल्ममा स्वाद बसेकाले तर्कसंगत र यथार्थ घटनामात्र समावेश भएका फिल्मलाई डकुमेन्ट्री वा डकुमेन्ट्री टाइपको देख्नु स्वाभाविकै हो। हिन्दी फिल्मका लाउड (अतिरञ्जित) अभिनय हेर्नेले 'रियलिस्टिक' अभिनय गर्नेहरूको 'एक्सप्रेसन' नै फिक्का भयो भनेर टिप्पणी गर्नसक्छन्। बलिउडको 'ढकतराजु' प्रयोग गरेर कुनै पनि फिल्म वा कलाकारको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नेपालमा छ।
जब कि बलिउड त्यस्तो उदाहरणीय वा अनुकरणीय फिल्म उद्योग होइन। विश्वका प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरूमा बलिउडको उपस्थिति असाध्यै कमजोर छ। बलिउड होइन, भारतबाटै प्रतिष्ठित अवार्ड जित्ने पछिल्लो फिल्म सन् २००६ को तेलुगु भाषाको 'भानाजा' हो। यसले बर्लिन फिल्म महोत्सवमा 'बेस्ट फस्ट फिचर' अवार्ड जितेको थियो।
पछिल्लो समय केही अफ–ट्रयाक वा प्रयोगात्मक फिल्म बने पनि बलिउड झुर फिल्म बन्ने विशाल उद्योग हो। ठूला स्टारहरूले खेल्ने र ठूलो बजेटमा बन्ने फिल्म नै बलिउडको वास्तविक अनुहार वा पहिचान हो। यस्ता फिल्मको चर्चा रिलिजअघि जति लामो हुन्छ, रिलिजपछि त्यति छोटो। कलात्मक, रचनात्मक र सिर्जनात्मक बहसमा यी फिल्म कतै उल्लेख हुँदैनन्।
एक्सन, कमेडी, लभस्टोरी, म्युजिकल छुट्टाछुट्टै विधा (जान्र) हुन्। तर, बलिउडका ९० प्रतिशत फिल्म यी सबै विधा घोलेर बनाइएको हुन्छ। यो खिचडी फिल्म हेर्ने बानीले दर्शकको सोचाइ र व्यवहारमा कस्तो असर पारेको छ? गम्भीर रिसर्च आवश्यक छ।
नेपालको हरेक चोकको संरचना खिचडी नै छ। मेडिकल, स्टेसनरी, तरकारी पसल, केक सप, कस्मेटिक, किराना, सैलुन, मासु पसल र साइबर हरेक चोकमा भेटिन्छन्। यस्तो संरचना निर्माण हुनुको कारण खोतल्ने जिम्मेवारी समाजशास्त्रीहरूको हो। तैपनि के भन्न सकिन्छ भने, समाज रचनात्मक हुन नसकेको एउटा प्रमाण चाहिँ हो यो।
हाम्रोजस्तो यथास्थितिवादी समाजमा अरूले भन्दा फरक सोच्ने र बजारमा नभएका वस्तु आविष्कार गर्ने प्रेरणा आवश्यक छ। एउटा कलात्मक र रचनात्मक शैलीका फिल्ममा दर्शकलाई सिर्जनात्मक वा तार्किक बनाउने क्षमता हुन्छ। तर, बलिउडले चाहिँ एकैखाले फिल्म उत्पादन गर्दै दर्शकलाई बारम्बार भन्छ, 'सधैँ उस्तै गीत, उस्तै फाइट, उस्तै नाटकीयता र उस्तै पात्रहरू हेर, त्यसमै रमाऊ। नयाँ वा फरक कुरा नसोच।'
बलिउडमात्र होइन, हलिउडका फिल्मले पनि एकप्रकारको पलायनवाद (इस्केपिज्म) हुर्काइरहेको छ। समाजको यथार्थ र मौलिक विषयवस्तुको सट्टा फेन्टासीमा रमाउनु पलायनवाद नै हो। यस्ता फिल्मले दर्शकलाई आफ्नो समाजमाथि चिन्तन गर्न सिकाउँदैनन्।
बलिउडका नियमित फिल्मले दर्शकलाई 'स्पेस' दिँदैन। 'ओभर एक्सपोजिसन' धेरै हुन्छ अर्थात् दर्शकले दृश्यबाट सजिलै बुझ्ने कुरालाई डायलग वा न्यारेसनबाट समेत बुझाउने प्रयास गरिन्छ। दर्शकलाई 'स्पेस' नदिएको भनेको यही हो। यस्तो फिल्ममा दर्शकले बौद्धिक अभ्यास गर्ने अवसर पाउँदैन। दर्शकको सिकाइ र बुझाइ सधैँ 'ए फर एप्पल'कै स्तरमा रहन्छ।
कतिपय नेपाली फिल्मकर्मी भारत र नेपालको संस्कृति मिल्ने भएकाले बलिउडको नक्कललाई जायज मान्नुपर्ने तर्क दिन्छन्। तर, 'नेपाल र भारतको संस्कृति र भाषा समान छ' भन्ने भारतीय भारतमा कमै भेटिन्छ। नेपाली फिल्मकर्मीमा देखिएको पलायनवादी मानसिकता बलिउडकै उपज हो। त्यस्तै बलिउडमार्फत सांस्कृतिक साम्राज्यवाद विस्तार भइरहेको पनि सत्य हो।
अहिले नयाँ पुस्ताका फिल्मकर्मीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतंी भनेकै आमदर्शकमा रहेको साँघुरो बुझाइ र बलिउडको संक्रमणलाई भत्काउनु हो। चलनचल्तीको भन्दा फरक र कलात्मक फिल्मलाई सजिलै स्विकार्ने दर्शक यहाँ अत्यन्त थोरै छ। दर्शकले पनि आफ्नो बुझाइ फराकिलो बनाउन इरान, फ्रान्स, चीन, सिंगापुर, इटाली जस्ता देशका फिल्महरू खोजेर हेर्न जरुरी छ। ठाउँठाउँका फिल्म हेरियो भने यो धर्ती र यसमा बाँचिरहेका मान्छेहरू बुझ्न त सकिन्छ नै, आफ्नो जीवनलाई चाहिएको ऊर्जा पनि प्राप्त हुनसक्छ। जीवनसँग नजिक रहेर फिल्म बनाउने निर्देशकहरू बलिउड र हलिउडभन्दा बाहिर धेरै छन्।
फलानो मेनपावर कम्पनी ! फलानो ब्युटिपार्लर ! फलानो खाजापसल ! साइनबोर्डमा यस्तो लेखिएको हुन्छ । तर, लेखिएअनुसार नै काम हुन्छ भन्न कहाँ सकिन्छ र ? राजधानीमा एकथरी पेशा वा व्यवसायको...
'प्रेम केवल प्रेम हो, प्रेमले केवल प्रेम गर्छ।''प्रेमको कुनै जात, धर्म र भूगोल हुँदैन।''प्रेम नै संसारमा सबैभन्दा सुन्दर कुरा हो।'प्रेमका यस्ता 'सुन्दर' परिभाषा र 'महानता' ध्रुवसत्य जस्तै आरोपित गरिएका छन्।...